कस्ता विषय पढ्ने ? | गृहपृष्ठ
Home अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट) कस्ता विषय पढ्ने ?
कस्ता विषय पढ्ने ?
काठमाडौं । एसईईको नतीजापछि कुुन विषय पढ्ने, कहाँ पढ्ने भन्ने निक्र्योल गर्न विद्यार्थीहरूलाई प्रायः मुश्किल हुन्छ । त्यसैले, शिक्षकहरू विद्यार्थीले साथीको लहलहैमा लागेर वा कलेजको प्रभोलनमा परेर विषय तथा कलेज छनोट गर्न नहुने सल्लाह दिइरहेका हुन्छन् ।
शिक्षाविद् महाश्रम शर्मा भन्छन्, ‘अरूको लहलहैमा विषय छान्दा पछुताउनुपर्ने हुन्छ ।’ उनका अनुसार शुरूमा हरेक अभिभावक र विद्यार्थीले पाठ्यक्रममा आधारित सक्षमता हासिल गर्न सिकाइ केन्द्रित शैक्षिक वातावरण, आप्mनो परिवारको आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्ने शैक्षिक संस्था र विषय छनोट गर्नुपर्छ । यसैगरी छात्रवृत्तिलगायत सुविधा, सहुलियतको उपलब्धता, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आधिकारिक निकायबाट लिएको अनुमति/स्वीकृति, अध्ययनपश्चात् कामको क्षेत्रमा सहभागी हुन पाउने रोजगारीको सम्भावना जस्ता विषयमा पर्याप्त सूचनासहित परामर्श लिनु उपयुक्त हुने पनि उनको सुझाव छ ।
कहाँ अध्ययन गर्ने, कस्तो विषय वा शैक्षिक धार पढ्ने भन्ने कुराको पनि यकिन नगर्दा धेरैजनाले ११ कक्षामै हीनताबोध गर्ने गरेको मनोविद् डा. गंगा पाठक बताउँछिन् । खासमा रोजेको विषय अध्ययनका लागि छनोट गर्न लागेको विद्यालयको आधारभूत भौतिक, मानवीय र सूचना तथा प्रविधिसहितको पूर्वाधार छ कि छैन, शैक्षिक क्रियाकलाप, अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायतको प्रबन्ध भए/नभएको पनि बुझ्नुपर्छ । सम्बन्धित कलेजले जीवनोपयोगी र रोजगारमुखी हुनेगरी अध्यापन गराउँछ कि परीक्षामुखी भएर भन्नेमा पनि सजग रहनुपर्छ ।
विद्यार्थीले पनि आफ्नो रुचि, चाहना र क्षमताको विषय क्षेत्रको बारेमा थप परामर्शका लागि आफ्ना अभिभावक, आफूले अध्ययन गरेको विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकासँग पनि परामर्श लिनुपर्छ । शिक्षाविद् शर्माका अनुसार आफ्नो रुचि, चाहना र क्षमता सबैभन्दा बढी आफैलाई थाहा हुन्छ । त्यसैले भोलि रोजगारी पाउने सम्भावना भएको र गुणस्तरीय जीवन जिउन सक्ने लागेको विषय वा शैक्षिक धार छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरल विषय पढेर सहज ढंगले पास हुन सजिलो विषय पढ्ने र प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न विज्ञान नै रोज्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन । वास्तवमा दक्षता हासिल गर्न सकियो भने सबै विषयको महत्त्व उत्तिकै छ ।
विश्वमा पढ्ने विषयहरू अनेकौं छन् । तर, नेपालमा थोरै विषय मात्र उपलब्ध छन् । नेपालको हकमा उपलब्ध विषयमार्फत नै पछि गएर जुनसुकै विषयमा विज्ञता हासिल गर्न सकिन्छ । बीमा, जेनेटिक साइन्सलगायत विषय नेपालमा पढाइ हुँदैन । नेपालमा एसईईपछि विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षा संकायका विषय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (पहिलेको एचएसईबी) अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाइन्छ ।
हाल नेपालमा संस्थागत रूपमा विभिन्न संस्थाले उच्च शिक्षा पढाइरहेका छन् । विद्यार्थीहरू एसईईपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कक्षा ११, सीटीईभीटी, ए लेभल वा भारतलगायत मुलुकका परीक्षा बोर्डअन्तर्गतका विद्यालयमा भर्ना हुन पाउँछन् । एसईई परीक्षा उत्तीर्णपछि सीटीईभीटीले स्वास्थ्य तथा इन्जिनीयरिङमा तीनवर्षे डिप्लोमा, नर्सिङ तथा ‘१५ महीने शर्ट टर्म’ कोर्सका रूपमा टेक्निकल पढाइ सञ्चालन गरिरहेको छ ।
यसरी छानौं उपयुक्त विषय
धेरै अभिभावक तथा विद्यार्थीले समयमै उपयुक्त विषय छनोट गर्न नसक्दा उच्च तहमा पुगेर अलपत्र पर्ने गरेको पाइन्छ । धेरैजसो विद्यार्थीले कक्षा १२ पछि आपूmले पढेको विषय बदल्ने गरेको उदाहरण पनि प्रशस्त पाइन्छ । विगत वर्षहरूमा प्लस २ मा विज्ञान पढेका विद्यार्थी माथिल्लो तहमा अन्य विषय अध्ययन गरेको उदाहरण धेरै छ ।
विद्यार्थीको क्षमता र इच्छाअनुसार विषय छनोट गर्न नसक्दा उच्च तहमा गएर विषय मात्र होइन, संकाय नै बदलेको प्रशस्त घटनाहरू छन् । एसईई दिएका विद्यार्थीले कस्ता विषय रोज्ने ? त्यो विषय अध्ययन गरेका जनशक्तिको बजारमा कस्तो माग छ ? रोजेको विषय पढेर पूरा गरेपछि समाजमा त्यसको कस्तो स्टाटस हुन्छ जस्ता कुराहरूले विद्यार्थीलाई अलमलमा परेको पाइन्छ । कुनै पनि विद्यार्थीले आफ्नो विषय छान्दा त्यो विषयमा स्वदेश तथा विदेशमा माग कस्तो छ, हेर्नुपर्ने समय आइसकेको छ । त्यति मात्र होइन, विषय छान्दा विद्यार्थीले लगानीको प्रतिफल दिने तथा समाजमा राम्रो स्टाटस दिन सक्ने विषय छान्नुपर्छ ।
विश्व बजारलाई हेर्दा सीए, बीबीए, बीबीएस, एमबीएस, एमबीए, आईटी, इन्जिनीयरिङलगायत प्राविधिक विषयको माग राम्रो देखिन्छ । समाजमा पनि यस्ता विषय पढ्ने व्यक्तिलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको पाइन्छ । यस कारण आफ्नो क्षमता भए उच्च तहमा यस्ता विषय अध्ययन गर्न सहज हुने गरी कक्षा ११ बाटै अध्ययन नियमित गराउनु उपयुक्त हुन्छ । अब कक्षा ११ र १२ को अध्ययनपछि अन्तरराष्ट्रिय गुणस्तरका कोर्स अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था छैन । नेपालमै विभिन्न किसिमका प्राविधिक तथा साधारण कोर्सका लागि नेपाली विश्वविद्यालयदेखि विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम छन् । त्यस्ता विषयहरू निजी स्तरका विभिन्न कलेजले समेत पढाउँदै आएका छन् । प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नुअघि विभिन्न कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक शिक्षा पढ्नुअघि कुनै पनि विद्यार्थीले पढ्न लागेको विषयको नेपाल र विश्वमा माग छ कि छैन, आफूले पढ्न सक्छु/सक्दिनँ भनेर विषयको बारेमा बुझ्नुपर्छ । साथै उक्त विषय पढ्न आफ्नो आर्थिक अवस्थाले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भनेर पनि पहिले नै विचार गर्नुपर्छ ।
विद्यार्थीले अध्ययन गर्न खोजेको विषयको कार्यक्रम कुन विश्वविद्यालयमा छ, त्यसबारे पहिले ध्यान दिनुपर्छ । नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र निजी विश्वविद्यालयबाट समेत विभिन्न संकायका कार्यक्रमहरूको अध्यापन हुने गरेको छ । यसैगरी केही निजी कलेजहरूले विदेशी विश्वविद्यालयका कोर्सहरू पनि अध्यापन गराएका छन् । माध्यमिक तहमा विषय छनोटका लागि अधिकांश विद्यार्थीले एसईईको प्राप्तांकलाई आधार बनाउँछन् । विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण विद्यार्थीले विज्ञान विषय नै पढ्नुपर्ने मान्यता छ । कम प्राप्तांक आएको विद्यार्थीले भने व्यवस्थापन, मानविकी तथा शिक्षा विषय लिनुपर्ने पुरानो चलन छ । तर, एसईईको प्राप्तांकभन्दा पनि आफ्नो रुचि प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।
प्लस टुमा विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पछि धेरैओटा क्षेत्रमा प्रवेश पाउँछन् । विज्ञान विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी तुलनात्मक रूपमा मेहनती र लगनशील हुनु जरुरी भएको मान्यता छ । विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने धेरैजसो विद्यार्थीको दीर्घकालीन लक्ष्य मेडिकलमा एमबीबीएस÷एमडी गर्नु नै हुने गर्छ । त्यस्तै उनीहरूले इन्जिनीयरिङ पनि अध्ययन गर्न सक्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा काम गर्न चाहने विद्यार्थीले व्यवस्थापन संकाय अध्ययन गर्छन् । व्यवस्थापनका विद्यार्थीले विभिन्न राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गर्ने अवसर पाउँछन् । अहिले विद्यार्थीहरूले जनरल म्यानेजमेन्ट मात्र नभई होटल म्यानेजमेन्ट र ट्राभल एन्ड टुरिजम पनि रोज्ने गरेका छन् । त्यस्तै मानविकी संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले सामाजिक विज्ञानको अध्ययन गर्न पाउँछन् । मानविकी संकायमा धेरै नयाँ विषयले प्रवेश पाएका छन् । मानविकी संकायअन्तर्गतका समाजशास्त्र÷मानवशास्त्र, आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विषयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढी छ । शिक्षण पेशा अँगाल्न चाहने विद्यार्थीले शिक्षाशास्त्र संकाय अध्ययन गर्न सक्छन् । कक्षा ११ र १२ मा शिक्षाशास्त्र संकाय अध्ययन गरेका विद्यार्थीले स्नातक तहमा मानविकी संकाय पनि पढ्न पाउँछन् ।
संकाय र यसका क्षेत्र
१. मेडिकल फिल्ड
मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी
फूड एन्ड डेरी टेक्नोलोजी